Home Sick – Thet Nandar
ပုစွန်ဆီပြန်၊ သရက်ချဉ်သုပ်၊ ကင်ပွန်းချဉ်ဟင်းရည်
ပူရီ ( Puri )
Posted on May 11, 2011 July 2, 2014 by Thet Nandar
Miss you, Mae Mae.
မေမေ့ကို အရမ်းသတိရလိုက်တာ ….
My niece, My mother and My daughter
My mother, my daughter and my niece
That’s me on the left. My daughter, my niece, my husband, my mother and my sister.
My mother, my daughter, me, my husband, my sister and my niece
Me, my mother, my niece and my daughter at Singapore – bird park
Categories: ( Me ) Thet Nandar, Daughter, English, Husband, Mother, Myanmar Text, Niece, Singapore, Sister
4 thoughts on “Home Sick”
Ma thetnandar ကသေချာကြည့်ရင် မေစံပယ်ညိုနဲ့ တူသလားလို့ 🙂
စေ့စေ့ကြည့်မှ မေစံပယ်ညိုထက် ချောတာပါယားးးးး 😀
OMG … :O
သောက်လက်စ ကော်ဖီတွေတောင် သီးသွားတယ်။ 😛
ပေါက်ရေ … ကိုယ့်အမေလည်း ချောတယ်။
ကြားထဲက ကိုယ့်က ဟိ …..
just kiding 😛
PreviousEast Point Shopping Mall
NextGleneagle Hospital @ Singapore